धर्म एउटा लुगा होइन जतिखेर मन लाग्यो फेर्न मिल्ने(धर्ममा आस्था छ भने पढेर से यर गरौं) – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /Intresting/धर्म एउटा लुगा होइन जतिखेर मन लाग्यो फेर्न मिल्ने(धर्ममा आस्था छ भने पढेर से यर गरौं)
मैलें फलानो धर्म परिवर्तन गरें नि ।’ मान्छेहरुले यो कुरा त्यती सजिलै भन्छ कि मानौ, ‘धर्म’ भनेको लुगा हो । ‘धर्म’ के हो ? यस सम्बन्धमा उनीहरुको बुझाई सही छैन । यदि धर्मलाई सही ढंगले बुझ्दो हो त ‘धर्म परिवर्तन’ हुने कुनै त्यस्तो बस्तु होइन ।
धर्म के हो ?-धर्म त्यही हो, जुन काम तपाईं साँचो, सत्य, सही गर्नुहुन्छ । तपाईंले गर्ने ति तमाम काम धर्म हो, जसमा श्रम, इमान्दारिता, सत्य मिसिएको छ । अर्थात सही ढंगले गरिने सही कर्म नै धर्म हो । यस्ता कर्मले तपाईंको जीवन सरल र सहज त हुनेछ नै, अरुको पनि हित हुनेछ ।खासमा तपाईंले गर्ने त्यो कर्म असलमा धर्म हो, जसले अरुको दुःख, पीडा, समस्या, अभाव टारिदिन्छ । धर्मबारे धेरै शब्दजाल बुनिरहनु आवश्यक छैन । यसलाई एउटै शब्दमा बुझ्दा हुन्छ, धर्म भनेको उपकार हो । कल्याणकारी काम हो ।कुनै स्वार्थ नराखी कसैप्रति पूर्णत सेवाभावले गर्ने कर्म पनि धर्म हो । असाहयप्रति तपाईंले दर्शाउने स्नेह भाव र गर्ने सेवा पनि धर्म हो । कसैका लागि गरिने पूण्यको काम पनि धर्म हो । सत्य र साँचो कुरामा सधै अडिग रहनु पनि तपाईंको धर्म हो ।
ति आडम्बर हुन्=पूजापाठ गरेर, देवतालाई भेटी चढाएर, मन्दिर धाएर, बिहान-बेलुकी आरती गरेर, पुराण लगाएर, ब्रत बसेर धर्म हुँदैन । यी आडम्बर हुन्, जबसम्म यी कुरालाई तपाईंले विधीपूर्वक र बुझेर गर्नुहुन्न ।यदी यी कुराको अर्थ र मर्म बुझेर, विधीपूर्वक गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहि त्यसबाट तपाईं लाभान्वित हुनुहुनेछ । किनभने यी सबै विधी-विधानले तपाईंको मन र शरीर शुद्धिकरण गर्नेछ । यी आफैमा धर्म होइनन् । तर, धर्ममा पुग्ने बाटो हुन् । अर्थात तपाईंमा धार्मिक प्रवृत्ति विकास गराउने माध्याम हुन् ।
ति धर्म होइनन्=तपाईंको जन्म, न्वरान, विवाह आदि विधी कुन पद्धतीबाट गर्नुभयो ? हिन्दु, इसाई, बौद्ध, मुश्लिम । वास्तवमा हामीले धर्म भनिरहेका यी कुरा धर्म होइनन्, पद्धती हुन् । जीवनलाई सही, सत्य र सन्तुलित ढंगले डोहोर्‍याउने एक प्रणाली हुन् । यी आफैमा धर्म होइनन् ।हिन्दु धर्म होइन, इसाई धर्म होइन, मुस्लिम वा बौद्ध धर्म होइन । संस्कार हो । पद्धती हो ।हाम्रो जीवनलाई समुन्नत ढंगबाट डोहोर्‍याउने प्रणाली हुन् । यी कुनैपनि पद्धतीलाई नियमपूर्वक एवं अनुशासित ढंगले आत्मसात गरेर हामीले आफ्नो जीवनलाई सही र सन्तुलित रुपमा जिउन सक्छौ । चराचर जगतसँग जोडिएर कसरी जीवनको सौन्दर्य खोज्ने भन्ने कुरा यी पद्धतीबाट थाहा हुन्छ ।
यति ठुली भइन ‘बजरंगी भाइजान’की मुन्नी
चर्चित फुटबलर नेयमारकी आमा छोरो भन्दा कम उमेरको केटासँग डेटिङमा
बुद्धको पाईला जसले ॐ: लेखेर सेयर गर्छ उसको मनोकामना पुरा हुनेछ !